Symposiums, Ceremonies & Others
Ministerial Level Events
Training Videos by Subjects
Training Videos by Universities
Teaching Videos – Dermatology
Teaching Videos – Medicine
Teaching Videos – Mental Health
Teaching Videos – Microbiology
Teaching Videos – OG
Teaching Videos – Ophthalmology
Teaching Videos – Orthopaedics
Teaching Videos – Ortorhinolaryngology
Teaching Videos – Paediatrics
Teaching Videos – Radiology
Teaching Videos – Rehabilitation Medicine
Training Videos - Conservative Dentistry
Training Videos - Prosthodontics
Training Videos - Periodontology
Training Videos - Paediatric Dentistry
Training Videos-Oral Medicine
Training Videos - Preventive and Community Dentistry
Training Videos - Orthodontics
Training Videos - Pharmacology
Training Videos - Pathology
Training Videos - Medical Microbiology
Training Videos - Pharmaceutics
Training Videos - Medical Laboratory Technology
Training Videos - Medical Imaging Technology
Training Videos - Physiotherapy
Training Videos - Prosthetics and Orthotics
Training Videos - Biochemistry
Training Videos - Maternal Health Nursing
Training Videos - Fundamental Nursing
Training Videos - Disease Control
Training Videos - Child Health Nursing
Teaching Videos – Surgery
Teaching Videos – Public Health Laboratory Science
Teaching Videos - Biostatistics and Medical Demography
Teaching Videos - Occupational and Environmental Health
Teaching Videos - Epidemiology
Teaching Videos - Population and Family Health
Teaching Videos - Medical Education and ICT
Teaching Videos - Nutrition and Food Safety
Teaching Videos - Pharmaceutical Chemistry
Teaching Videos - Medical Engineering
Teaching Videos - Health Policy and Management
Teaching Videos - Community Health
Teaching Videos - Environmental and Nutritional Disease-Pathology
Teaching Videos – UM 1, Yangon
Teaching Videos – UM 2, Yangon
Teaching Videos – UM, Magway
Teaching Videos – UM, Mandalay
Teaching Videos – UM, Taunggyi
Friday Health Talks
20th Myanmar Traditional Medicine Practitioners’ Conference and Seminar
MICC 2, Nay Pyi Taw, Myanmar
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် က (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သည့် ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
၂။ (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ပြောကြားသည့် ညီလာခံ အဖွင့်မိန့်ခွန်း (မူကြမ်း) (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
၃။ (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
၄။ (၁၉) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံနှင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့်မိန့်ခွန်း (၂၈-၁၂-၂၀၁၈)
၅။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းဆေးမှတ်တိုင်များစာအုပ် (ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၁၉)
၆။ အဆိုပြုဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ် (၁) – မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် တိမ်မြုပ်နေသော နက္ခတ္တနယဆိုင်ရာ ကုထုံးနည်းစနစ်များ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်အသုံးပြုရန်
၇။ အဆိုပြုဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ် (၂) – ဝိဇ္ဇာဓရနယ ကုထုံးနည်းစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
၈။ အဆိုပြုဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ် (၃) – မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
၉။ အဆိုပြုဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ် (၄) – မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးနှင့် ပရဆေးကုန်ကြမ်းများ ပြည်တွင်း ပြည်ပဈေးကွက်၌ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်
1. Vice President U Myint Swe delivers speech at preparatory meeting for 20th MTMPC, seminar (25-11-2019)
2. (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (၂၅-၁၁-၂၀၁၉)
3. (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ် (၁၁-၁၂-၂၀၁၉)
4. Vice President U Myint Swe calls for development of human resources in traditional medicine sector (12-12-2019)
5. (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
6. (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး အမှာစကားပြောကြား (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
7. (၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ် (၁၃-၁၂-၂၀၁၉)
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၅-၁၁-၂၀၁၉)
VP U Myint Swe delivers speech at preparatory meeting for 20th MTMPC
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား (၁၁-၁၂-၂၀၁၉)
20th Myanmar TMP Pre-conference Discussion (11-12-2019)
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
20th MTMP Conference & Seminar_Opening Ceremony (12-12-2019)
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး အမှာစကားပြောကြား (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
Union Minister Dr. Myint Htwe deliversaspeech at the 20th MTMP Conference & Seminar_Opening Ceremony (12-12-2019)
DTM DG Dr Moe Swe at the 20th MTMP Conference & Seminar_Opening Ceremony (12-12-2019) (16)
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနား (၁၃-၁၂-၂၀၁၉)
20th Myanmar TMP Seminar (13-12-2019)
PrevPreviousAdvisory Committee Meeting on National Health Policy Re-formulation
NextWorkshop on Kayah State Multi-sectoral Nutrition Action PlanNext
© Copyright 2019 by the Ministry of Health and Sports, Myanmar. Developed by
eHealth Division, DoPH